calendar 2013 “Town” Kwikhalenda - Imagazini yoyilo
Kwikhalenda Idolophu yiteyiphu enamaphepha enezinto ezinokudityaniswa ngokukhululekileyo kwikhalenda. Hlanganisa izakhiwo ngeendlela ezahlukileyo kwaye ukonwabele ukudala eyakho idolophu incinci. Ubomi boYilo: Uyilo lomgangatho lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umxholo "Wobomi ngoYilo".
Igama leprojekthi : calendar 2013 “Town”, Igama labayili : Katsumi Tamura, Igama lomthengi : good morning inc..
good morning original calendar 2012 “Farm” Ikhalenda Thursday 2 December
inci I-Ceramic Wednesday 1 December
Prisma Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic Tuesday 30 November
Kwikhalenda Katsumi Tamura calendar 2013 “Town”